विवाह गर्दै आदित्य-नेहा ! –
विवाह गर्दै आदित्य-नेहा !
एजेन्सी स् ​टीभी रियालिटी सो ‘इन्डियन आइडल-११’को सेटमा गायिका नेहा कक्कड र प्रस्तोता आदित्यनारायण झाको विवाह तय भएको छ। आदित्य नेपाली गायक उदितनारायण झाका छोरा हुन्।
आमालाई देखेर नेहाले सोधिन्, ‘यहाँ के भइरहेछ रु ’ उत्तर दिँदै आमाले भनिन्, ‘हामीले तिम्रो विवाह आदित्यसँग तय गरेका छौं। मलाई यो केटा राम्रो लाग्छ।’ सोमा आदित्यकी आमा पनि उपस्थित थिइन्। उनले नेहासँग भनिन्, ‘हामी तिमीलाई धेरै माया गर्छौं र तिम्रो फ्यान पनि हौं।’
« बलत्कारीलाई जन्मकैदको फैसला
धनुषामा हत्या गरिएका महतोलाई सहिद घोषणा गर्न कांग्रेसको माग »